Maxay markan dhaheen dadka qofka ay doortaan uu noqdo madaxweynaha Mareykanka? | Gaaroodi News
Maxay markan dhaheen dadka qofka ay doortaan uu noqdo madaxweynaha Mareykanka?
October 13, 2020 | Published by: Tifaaftiraha
Dadka daggan ismaamulka Vigo ee ka tirsan gobolka Indiana, Mareykanka, waxay leeyihiin wax sidii mucjiso oo kale ah. Marka laga reebo labo madaxweyne oo la doortay 1908 iyo 1952, tan iyo sanadkii 1888-kii waxaa doorashada xilka madaxweynaha ku guuleysanayay qofka ay iyagu u codeeyaan.
Taariikhdaas awgeed, fikirka ay dadka reer Vigo ka qabaan musharraxiinta u taagan doorashada Mareykanka wuxuu caalamka u iftiimin karaa natiijada kasoo bixi karta doorashada dhaceysa 3-da bisha November.
Lamaane lagu kala magacaabo Susan iyo Terry Hayhurst, oo ah beeraley deegaankaas ku leh dhul beereed baaxaddiisu dhan tahay 1,700-acre, taasi kama hor istaagin inay safarro ku tagaan caalamka qeybihiisa kala duwan. Waxay tageen Yurub, gabadhooda oo 25 jir ahna waxay ku sugan tahay London oo ay wax ka baraneyso.
Marka ay timaado dhinaca siyaasaddana, Donald Trump ayaa ah qofka kaliya ee ay doonayaan inay u codeeyaan.
Terry wuxuu beertaa galley iyo digir uga baxda dhinaca koonfurta-bari ee deegaankaas, wuxuuna leeyahay in ka badan 20 neef oo lo’ ah
Gobolka Indiana wuxuu hoggaaminayaa ganacsiga dhoofinta digirta, kaasoo qiyaastii kalabar ka mid ah loo dhoofiyo dalka Shiinaha.
Dagaalka dhinaca dhaqaalaha ee uu maamulka Trump kula jiro Shiinaha ayaa sababay in Beijing ay ku jawaabto canshuur 33% ah oo ay sanadkii 2018-kii kusoo rogtay digirta uga imaata Mareykanka.
Laakiin Mr Hayhurst, oo ka qalinjabiyay Jaamacadda Purdue, wuxuu aaminsan yahay in ganacsiga beeraha ee Mareykanka uu sii xoogeystay – murankii labada dal wuu khafiifay canshuurtiina meesha waa laga saaray.
Wuxuu fikir ahaan qabaa in madaxweyne Trump uu qabtay shaqo aad u wanaagsan. “Muddo dheer ayuu Mareykanka gacan saar la lahaa waddamo kasoo horjeeda waxa uu sameynayo. Laakiin waxay ila tahay in ilaa hadda sida muuqata aan ka maarmi karno xidhiidhka Shiinaha.” Ayuu yidhi.
Mr Hayhurst iyo xaaskiisa oo beertooda jooga
Mrs Hayhurst iuaduna waxay fikirka la qabtaa seygeeda.
Deegaanka Vigo, oo ku yaalla qararka wabiga Wabash, wuxuu si siman ugu kala qeybsan yahay miyi iyo magaalo. Dadka asal raaca ah ee halkaas daggan waxaa la isugu dheelli tiraa waxbarashada ay ka helaan macadyada iyo jaamacadaha ku yaalla qeybo kala duwan oo gobolkaas ah.
Xarumaha waxbarasho ee ay leeyihiin dadka reer Vigo waxaa ka mid ah jaamacadda Gobolka Indiana.
Waxaa jira arrimo kale oo uu caan ku yahay deegaanka Vigo, marka laga hadlayo codeynta doorashada. Halkii uu Mr Trump si fudud ugu guuleystay doorashadii heerka xisbi ee halkaas ka dhacday sanadkii 2016-kii, ma jirin musharrax si cad ugu guuleystay tartankii deegaankaas ku dhex maray siyaasiyiinta xisbiga Dimuqraaddiga.
Codadkii la dhiibtay waxaa si siman loogu kala qeybiyay musharraxiinta kala ah Hillary Clinton iyo Bernie Sanders.
Intaas waxaa sii dheer in gobolkan aan la kala garaneynin cidda siyaasad ahaan ugu awoodda badan labada xisbi ee Jamhuuriga iyo Dimuqraaddiga.
Xitaa marka ay siyaasiyiinta deegaanka isku dayaan inay xisbiyada kala baddashaan wax dan ah lagama yeesho. Sababtoo ah dadka halkaas daggan go’aankooda doorashada kuma xidhna xisbi balse wuxuu ku xidhan yahay hadba sida ay shakhsiga siyaasiga ah u arkaan..
Laakiin doorashadii dhacday 2016-kii ayaa laga dareemayay in dadka ay hadda sii baddalayaan fikirkaas.
Meel 15 daqiiqo gaadhi uu uga socdo beerta Mr Hayhursts waxaa ku taalla magaalada Terre Haute, oo hoy u ah qiyaastii 60,000 oo ruux. Waxaa halkaas sidoo kale ku yaalla xabsi weyn oo uu leeyahay maamulka federaalka, kaasoo ay ku xidhan yihiin maxaabiis igu jira dad diyaarado afduubtay, burcadda MS-13 iyo caddaanka cunsuriyiinta ah ee dadka laaya, sida Dylann Roof, oo sanadkii 2015-kii sagaal qof ku dilay kaniisad ku taalla Waqooyiga California
Pat Goodwin, oo ah siyaasi ka tirsan xisbiga Dimuqraaddiga, oo doonaya inuu u tartamo xil sare oo maamulka magaaladaas ah ayaa sheegaya in hadda ay suuragal tahay inuu isbaddal ku yimaado fikirkii ay dadka deegaankan ka qabeen madaxweyne Trump.
“Ma jiro qof horay u saadaaliyay isbaddalka aan aragnay tobadii/siddeeddii bilood ee ugu dambeysay, sida uu madaxweynaha ula tacaalay cudurka safmarka ah ee corona awgeed,” ayuu yidhi. “Dad badan ayaa laga yaabaa inaysan rabin inay maqlaan taas; waxaa halkan jooga taageerayaal badan oo uu leeyahay madaxweyne Trump. Laakiin tirooyinka been masheegayaan. Shaqo aad u liidata ayuu qabtay.”
Goodman wuxuu sheegay in hadda ay deegaankaas kusii xoogeysaneyso taageero loo hayo musharraxa xisbiga Dimuqraaddiga ee Joe Biden, taasoo aysan horay u heysanin Hillary Clinton markii ay xilka madaxweynaha u tartameysay sanadkii 2016-kii.
Kaddib markii uu Barack Obama labadii jeerba ku guuleystay sanadahihii 2008 iyo 2012, afar sano ka hor Donald Trump ayaa Mrs Clinton uga adkaaday boqolkiiba 15 ama 6,002 oo cod.
“Aad ayey natiijooyinka isu soo dhawaan doonaan,” ayuu yiri Mr Goodwin. “Way adkaan doontaa sida loogu kala baxo halkan.”
Dadka qaar ee halkaas ku sugan waxay sheegayaan in wali aysan go’aan ka gaadhin ciddii ay dooran lahaayeen. Waxaa kuwaas ka mid ah Kyla Brown, oo 23 jir ah, kana qalinjabisay maadada biology-ga heerkeeda koowaad ee jaamacadda.
Xilli ay farriimo badan ka kala imaanayaan Trump iyo Biden wali ma aysan go’aansanin qofka ay xulan doonto.
“Waa go’aan aad u adag sababtoo ah labada qof ee aan kala dooraneyno midna kuma qanacsanin,” ayey tidhi. “Waa cajiib inaan taagannahay meel aan laga laaban karin, musharraxiintana aan la baddali karin.”
Waxay ka walaacsan tahay da’da Mr Biden, halka Trump aysan dhaqankiisa jecleysanin. “Waa nin aad u hadal adag oo bahdila dad badan,” ayey tidhi.
Laakiin dadka qaarkood, sida Senka Delich waxay la dhacsan yihiin nidaamka madaxweyne Trump. “Trump ma aha siyaasi; ma aha qof lasoo hoggaaminayo. Waa dhab,” ayey tidhi. “Wuxuu dhahaa waxyaaba aad adiguba dhahdid ama aan aniga dhaho markaan cadhoodo.”
Senka Delich (bidix) waxay sheegtay inay jeceshahay waddaninimada Trump
Mrs Delich waxay sheegtay in Mareykanka ay timid 27 sano ka hor, xilligaasoo ay kasoo qaxday waddankii horay loo odhan jiray Yugoslavia, kaddib markii seygeeda lagu dilay dagaalkii Bosnia.
Markii ugu horreysay ee ay timid, waxay iyada iyo gabdhaheeda dhar ka qaateen meel qashin qub ah.
Taas waxaa ka muhiimsan inay tidhi: “Trump wuxuu jecel yahay waddankiisa.”
Jacaylka waddanka iyo dadaalka uu madaxweynaha u sameeyo sare u qaadidda dhaqaalaha ayaa ka mid ah waxyaabaha ay Mrs Delich ku taageerto maamulka hadda ka taliya Mareykanka.
“Halkan waxaan imid anigoo waxba heysanin; Luuqadda ingiriiska kuma hadli karin. Hadda waxaan leeyahay labo makhaayadood iyo meherad qaxwada lagu cabo. Waxaan shaqeeyaa 16/17 saacadood maalintii; Waan jeclahay sidaas,” ayey tidhi. “Haddii aad dooneysid shaqo, Mareykanka waad ku rumeyn kartaa riyadaada.”